Waalid – si ay nafaqo iyo daryeel uga helaan Wiilkooda – Maxkamadda la tiigsanaya! | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Waalid – si ay nafaqo iyo daryeel uga helaan Wiilkooda – Maxkamadda la tiigsanaya!
Waalid – si ay nafaqo iyo daryeel uga helaan Wiilkooda – Maxkamadda la tiigsanaya!
Posted by: Mahad Mohamed May 20, 2020
Himilo – Waalidiin Shiinees ah ayaa dacwad ku oogaya wiilkooda kaddib markii uu siin waayay nafaqo iyo taageero maaliyadeed oo ay ku noolaadaan.
Waxaa jira dhaqan la yiraahdo Filial piety oo diimaha Buudiska iyo Taoist-ga ay ku booriyaan ilmuhu inay xushmad, iyo ramasho u muujiyaan labada waalid ee dhalay. Laakiin dhaqankaasu, marka la fiiriyo Galbeedka, muhiimad weyn kuma lahan.
Inaad gudan-weyso waajibka kaa saaran labada waalid ee ku dhalay waxaa gudaha Shiinaha iyo bulshooyinkiisa ku badan dalalka qaar sida Singapore loo arkaa gaboodfal weyn. Sidaas awgeed, inta badan waa madhacdo in waalidku ka ashtakoodo inuusan nafaqo iyo daryeel ka helin ilmihiisa, laakiin mararka qaar, haa! Waxaana arrintooda soo fara-geliya booliska, laamaha bulshada u qaabilsan taakulada iyo bankiyada.
Sheekadanina waa mid kamid ah tusaalayaasha dhifka ah oo wiil uu labadiisa waalid ugu diido inuu ka nafaqeeyo hantidiisa gaarka ah.
Marka loo eego warbaahinta gudaha, waalidiintan Mr-ms Zhang, oo ku nool gobalka Henan, ayaa sannadkii hore dacwad ka gudbiyay dayacaadda wiilkooda kula kacay. Maxkamadda ayaana amartay inuu bil walba mushahar joogto ah meel u saaro labadiisa waalid. Wuxuuse ka dhega-fureystay amarkii lagu soo rogay.
Markii uu sidaas kusii waday muddo sannad ah, waalidka ayaa booliska u bandhigay inay soo fara-geliyaan xaaladda jirta. Inta badan waxaa boolisku ku waaninayay wiilku inuusan ka dhega-adeygin nafaqeynta iyo daryeelka labadiisa waalid. Balse markii uu iyagana, sida waalidkiisa, uga dhega-fureystay inuu fuliyo amarkii lagu soo rogay, waaxda shaqaalaha rayidka ayaa baaritaan ay sameysay waxay ku ogaatay in koontadiisa bangiga ay ugu jirto lacag badan.
Habka ugu sahlan ee looga qaadi karo lacagta uu ka bakhiilayo labadii dhashay ayaa noqotay in laga xayiro ilaa uu ka bixinayo nafaqada iyo daryeelkii looga baahnaa inuu ku bixiyo noloshooda.
In sharcigu wali uu yahay mid ay ku tiirsan yihiin labada waalid oo da’da 70 meeyada ku jira si ay nafaqo uga helaan ubadkii ay dhaleen, waa ayaan-darro. Waana wax laga uurxumaado.
Previous: Sheekada wiilkii qudaarta loo diray ee qof nool la yimid!
Next: Liverpool oo beddalka Firmino ka raadineysa Bayer Leverkusen
Haweeney go’aansatay inay jajabiso maacuunta gurigeeda
Ma kugu soo dhici laheyd inaad geed fuusho si aad booliska uga badbaado?
Bisad xanaaneysa digaaga yar yar